समलिङ्गी जोडीको कथा: 'सलिजो' उपन्यास | छविरमण सिलवाल
समलिङ्गी जोडीको कथा: 'सलिजो' उपन्यास
कृति/समीक्षा छविरमण सिलवाल May 16, 2010, 8:28 am
घरेलु कामदार, गृहिणी, दाम्पत्य जीवनका कर्तव्य, असख्य सन्तानको उत्पादन जस्ता कुराबाट नारीहरु सधैँ दल्लिरहेका हुन्छन । नारी केवल आफैमा नारी नभएर उसलाई यहि समाजले नारी बनाएको हो । साँच्चिकै भन्नु पर्दा पितृसत्तात्मक बाहुल्यताले पनि नारी जातीलाई पिडित बनाईएको छ । पश्चिमी मुलुकहरुमा त्यस्तो नरहे पनि समग्ररुपलाई हेर्दा नारीमाथिको शोषण निकै रहेको अनुमान रहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा नारीले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो जीवन यापन गर्न पाउँने अधिकार सुनिश्चित गर्न निकै कठिन रहेको तथ्य हामीले पाउँछौ । समाजमा अनेकौ भ्रमहरु फिजाएर उनीहरुलाई शोषित गर्ने गरिन्छ । यसमा उसले आफ्नो अघिकार सुनिश्चित गर्नको लागी निकै संघर्ष गर्नू परेका उदाहरणहरु हामीले देखेका छौँ । यस्तो परिवेशमा समलिङ्गी भएर रहनु भनेको झन् समाजको घृणाको पात्र हुनु हो । हाम्रो समाजले सहजै स्विकार गर्न नसकेको अवस्थामा पनि केहि त्यस्ता घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् । उनीहरु आफ्नो हक अधिकारको बारेमा खुलेरै डट्ने गरेका समाचारहरु हामीले पढेका छौँ । आजको २१औँ शताव्दीमा पनि यस्ता किसिमका व्यवधानहरु रहेका छन् । यस्तै किसिमका संघर्षका कुराहरुलाई मोहनराज शर्माले उपन्यासका पात्रहरु बनाएर ‘सलिजो’ उपन्यास बजारमा ल्याएका छन् । हुनतः समलिङ्गीहरुको वारेमा सवैको आ–आफनै मत–मतान्तर रहदैँ आए पनि हाम्रो समाजले अझै पनि स्विकार गर्न सकेको छैन् । पितृ प्रधानताले नारीलाई गौण बनाई उनीहरुलाई सधैँ पुरुषको सेवामा राख्न प्रयत्न गरेकोले पनि नारीहरु स्वतन्त्र चाहने गर्छन् ।
अङ्ग्रेजी कवि एड्रियानी रिख पनि लेज्बिअन थिइन, उनी भन्छिनः–‘प्रत्येक नारी भित्र यस्तो नारी हुने मनोचेतना सुषुप्त हुन्छ ।’ विश्व साहित्यलाई हेर्दा केहि साहित्यकार लेखकहरु लेज्बिअन वा गेहरुलाई पात्र बनाएर सिर्जना गरे पनि नेपाली साहित्यमा भने शर्माको यो कृति पहिलो नै हो । (महिला समलिङ्गीहरुलाई लेज्बिअन र पुरुष समलिङ्गी गे भन्ने गरिन्छ) बालमन्दिरमा हुर्केकी ज्वाला र सम्पन्न परिवारमा हुर्केकी रुपा दुवै सम्पन्न छन् । रुपा स्कुलमा शिक्षिका छिन् । ज्वाला बैकमा जागिरे । दुवै नारी(लेज्बी र लेज्बा)को साहसिक यात्राका कुराहरुसंगै वर्तमान नेपालको एक नविन दृश्य चित्र यस उपन्यासमा भेट्न सकिन्छ । एउटा युगौँ युग देखि छेलिएर बसेको यथार्थको चित्रण गरेका छन् शर्माले ‘सलिजो’ उपन्यास मार्फत । यस उपन्यासका पात्र रुपा र ज्वालालाई डाइमन दि, प्रो.शर्मा डा.चकोर र बैकका मेनेजरहरुले सकारात्मक रुपमा सघाए पनि रुपाका बुबाआमा नै विपक्षमा उभिएर निकै तनाव दिएका घटनाले हाम्रो बर्तमान समाजको चित्रण गर्दछ । त्यस्तै गाडी मर्मत गर्र्र्ने मिस्त्रीले नै बैक डकैती गर्न पुग्छ । ज्वालाले उसको स्वर चिनकोले उसलाई अपहरण गरेर पालै पालो बलत्कार गरेर फ्याक्नु यी हाम्रो समाजका घटित दृश्यहरु जस्तो लाग्छ । यस उपन्यासले के स्पस्ट गर्छ भने लेज्बिअन भएर समाजमा रहनु त्यति सजिलो छैन । सवैको घृणाको पात्र बन्नु पर्ने कुराहरु रहेपनि केहि व्यक्तिहरु सकारात्मक रहेको पनि पाइएको छ ।
अध्ययनका क्रममा बनारसमा जम्काभेट भएका तस्रो लिङ्गीहरुलाई सम्झदैं उनीहरुको जीवनशैली, रहन सहनको व्यवहारबाट नजिक भएका मोहनराज शर्मालाई तिनै विगतका अनुभवहरुले यस उपन्यास लेख्न घच्घच्याएको देखिन्छ । उनीहरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणहरुलाई पनि सम्झिन्छन् लेखक यस्तै पीडाबोधहरुले हाम्रो समाजमा पनि जरो गाडेरै बसेको छ । तस्रो लिङ्गीहरुलाई विषय वस्तु वनाएर लेखिए पनि यो उनीहरुको समस्यालाई गम्भिर रुपमा उठ्नु पर्छ भन्ने कुराहरुलाई सवैले स्विकार गर्नूपर्छ तस्रो लिङ्गी भनेका पनि यहि समाजका मान्छेहरु हुन भन्ने कुरामा बुलन्द अवाज उठ्नु पर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश यस पुस्तकले प्रवाह गरेको छ ।
विधायक तथा ब्ल्यु डायमन्ड सोसाइटीका अध्यक्ष सुनिबाबु पन्त यस उपन्यासका बारेमा यस्तो धारणा व्यक्त गर्छन्–‘तेस्रो लिङ्गी र तेस्रो लिङ्गीको वास्तविकता र हामीले भोग्नुपरेका समस्याको सहि पहिचान गरी समाजमा रहेका भ्रम र अन्ध विश्वासलाई चिर्ने प्रयत्न गर्नू भएका छ । उपन्यासको पात्र र घटनाक्रम काल्पनिक भएपनि धेरै समलिङ्गी र तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिलाई आफ्नै जीवनको वास्तविकता लाग्ने छन् र अन्य पाठकलाई पनि यस उपन्यासले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङख्यकको जीवन, भोगाई र समस्याहरुका बारेमा एक पटक अर्को ढंगले सोच्न बाध्य अवश्य बनाउनेछ ।’ आपसी प्रेम विश्वास भरोसा र समर्पणले नै संसार जोगाउँछ । मानविय मूल्य मान्यताको पहिचान दिन्छ । यस्ता कुराहरु यस उपन्यासका सवल पक्षहरु हुन । पात्र चयन र उनीहरुको बाह्य र आन्तरिक स्वभाव बोलीले उपन्यासलाई जीवन्तता दिएको छ । एउटा वीर पात्रले दिएको दुःख र उसको चित्रले लगाएका विविध अर्थले प्रो. शर्माले मनोवैज्ञानिक तवरबाट भएको अर्थले पनि उपन्यासका पात्रलाई झस्काउँछ उनीहरु सधैं सर्तक रहने गर्छन । निकै शुक्ष्म कुराहरु पनि यस उपन्यास भित्र प्रस्तुत हुनु लेखकको कला हो । प्रस्तुति कै क्रममा भने केहि अस्लिलताले कता कता असहज भने महशुस गराउँछ । यति हुँदा हुँदैपनि यस सलिजो उपन्यासलाई लेखकको साहशिक कदमको रुपमा लिन सकिन्छ । उनको यस किसिमको प्रयोग सवै भन्दा उच्च र भिन्न रुपमा रहको छ । यस भन्दा पछि यस्ता उपन्यासहरु नआउलन भन्न सकिन्न ? तर नेपाली साहित्यमा विषयवस्तुका हिसावले पहिलो नै रहेको छ । यो मोहनराज शर्माको गद्याख्यानको एक उत्कर्ष र साहसिक कदम हो । सीमान्त प्रकाशनले प्रकाशनमा ल्याएको यस कृतिको मुल्य रु.२३० रहेको छ ।